२३ वर्षीया सुजिता साँच्चिकै आफ्नै दाजुसँग प्रेममा थिइन् ? खुल्यो अपत्यारिलो यतार्थ – Khabaarpati
२३ वर्षीया सुजिता साँच्चिकै आफ्नै दाजुसँग प्रेममा थिइन् ? खुल्यो अपत्यारिलो यतार्थ
July 26, 2021 adminLeaveaComment on २३ वर्षीया सुजिता साँच्चिकै आफ्नै दाजुसँग प्रेममा थिइन् ? खुल्यो अपत्यारिलो यतार्थ
काठमाडौं । पूर्वीचितवनको राप्ती नगरपालिका–३ का २३ वर्षीया सुजिता भण्डारी मृत्युको अनु,सन्धान गरिरहेको प्रहरीले एक जनालाई प,क्राउ गरेको छ । प,क्राउ पर्नेमा झापाको झापा गाउँपालिका–६ शरणामतिका २३ वर्षीय सचिन भनिने सुकदेव भण्डारी छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको उनलाई काठमाडौँबाट प,क्राउ गरिएको जानकारी दियो ।
प्रहरी उपरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारीले सुजिताको आमा अम्बिका भण्डारीको जाहे,रीले अभि,युक्त सुकदेवलाई प,क्राउ गरिएको जानकारी दिईन । गत असार ११ गते घरबाट हराएकी सुजीता २० गते घर नजिकैको ब्रह्मस्थानी सामुदायीक वनमा मृ,तावस्थामा भेटिएकी थिइन ।
प,क्राउ पर्ने सुकदेव र सुजिताको सम्बन्ध नाताले ठूलो बाको छोरा र काकाको छोरी भएपनि दुवैबीचको प्रेम सम्बन्ध रहेको अनु,सन्धामा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रेम सम्बन्ध भएका उनीहरु एक अर्कामा टाढि,एर बस्न नसक्ने जनाउँदै सुजिताले गरेको विवाह प्रस्ताब सुकदेवले अ,स्विकार गरेपछि घ,टना भएको प्रउअधिकारीले जानकारी दिए ।यो बिषयमा समाजिक बिश्लेशक आनन्द राम पौडेलले आफ्नो बिचार राखेका छन हेरौ भिडियोमा
अष्ट्रेलियाको सिड्नी जाने एकतर्फी हवाई भाडा झण्डै १२ लाख !
गायिका अञ्जु पन्त र पाष्टर थीर कोइरालाका यस्ता तस्वीरहरु बाहिरिएपछि….
१७ बर्ष पछि केटि बनेका युवकको पिडा (भिडियो)
July 7, 2021 goodmam
माइतीसंग ऋण मागेर दुवई पठाएको श्रीमानले ‘म नेपालमै छु केटीले मलाई राख्यो ६ हजार पठाउ’ भनेर अचानक फोन गरे, प्रहरीलाई ‘श्रीमान खोज्दिनु’ भनेर जाँदा मिडियामा जानु भनेर पठाए (भिडियो हेर्नुस्)
February 20, 2021 goodmam
December 28, 2020 Khabar Pati